7K သည် 9K 12K ခရီးဆောင် AC အ - Foshan Blueway လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများ, Ltd.
● ရွေးချယ်စရာ: Intelligent WIFI & Alexa voice control အဆင့်မြင့်နည်းပညာနှင့် R ကိုအတူ&capacity စွမ်းရည်, Blueway has obtained over more than 20 patents and become one of the leading HVAC manufacturers in China. Meanwhile, 70% Blueway ထုတ်ကုန်များပြည်ပဈေးကွက်သို့တင်ပို့ရောင်းချ, သြစတြေးလျအပါအဝငျ, ဥရောပ, မြောက်အမေရိက, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, တောင်အာဖရိက, South America and obtained worldwide recognition. ထို့အပြင်, it has over 20 တရုတ်ပြည်မတူညီသောမြို့ကြီးများတွင်ကိုယ်စားပြုရုံးများရှိသည်, ထို့အပြင်ဥရောပ၌၎င်း၏ခွင့်ပြုချက်ဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ်, အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသ, မြောက်အမေရိကနှင့်တောင်အမေရိက.
သ, Blueway ပြီးပြီ 10000 ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူအင်ဂျင်နီယာဖြေရှင်းချက်. What's more, Blueway သည်တရုတ်စျေးကွက်ရှိ Hilton Hotel မှထောက်ခံသည့်အမှတ်တံဆိပ်လည်းဖြစ်သည်. Blueway သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိမိတ်ဖက်များအားအမြင့်မားဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ရှိသောဖြေရှင်းနည်းများနှင့်ဆန်းသစ်သောထုတ်ကုန်များကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းအားဖြင့်၎င်း၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်ကတိက ၀ တ်များကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သည်. မေး: Where’s the manufacturing location?
က: Our factory is located in Guangdong, တရုတ်.
မေး: Any certificates?
က: We have ISO, CCC, TUV test report, စသည်တို့.
မေး: Any third party to verify your products?
က: Yes, we’ve also gotten TUV test report from Guangdong TUV Company.
မေး: Adopt which refrigerant type?
မေး: With remote controller?
က: Yes, remote controller as standard. And we provide intelligent WIFI & Alexa voice control for optional.
မေး: Can it shipped by air?
က: Yes, but generally, refrigerant will be discharged as requested by the airlines.
24K သည် 48K 60K ကြမ်းပြင် - ရပ်နေတဲ့ AC
9K သည် 12K 18K 24K နံရံကပ်တပ်ဆင်ထားသည် AC